बिहे गर्दा सात फन्का घुम्दा यी सात बचनका लागि घुमिन्छ र यीनको अर्थ यस्तो छ - यादका टुक्रा
हामीकहाँ बिवाहलाई एक यस्तो बन्धन मानिन्छ, जो केवल शरीरको मात्र नभई मन र आत्माको पवित्र बन्धन हुन्छ । वैदिन संस्कृति अनुसार जीवनको महत्वपूर्ण सोह्र संस्कारमध्ये बिवाह पनि एक हो । यस संस्कार बिना जीवन अपूर्ण मानिन्छ । हाम्रो मात्रै सभ्यता नभएर संसारभरकै सभ्यताहरुमा विवाहलाई मानव जीवनका अति नै महत्पुर्ण नै मानिन्छ ।
बिवाह के हो ? : बिवाहको शाब्दिक अर्थ हो, कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्नु । जब केटा र केटी पती-पत्नीमा रुपान्तरण हुन्छन्, उनीहरुले एकसाथ पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । बिधिगत हिसाबले बिवाह गर्दा आगोलाई साक्षी राखेर नवदम्पतीले एकअर्कालाई सात बचन दिने गरिन्छ । वास्तवमा त्यो सात बचन मनन र अनुसरण गर्ने हो भने दाम्पत्य जीवनमा कहिं खटपट आउँदैन ।
पहिलो बचन : पहिलो बचनमा कन्यले बरलाई भन्छिन्, तपाई कुनै तीर्थयात्रामा जानुहुन्छ, ब्रत-उपबास गर्नुहुन्छ, धार्मिक कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यसमा मलाई पनि सामेल गराउनुहोस् ।
दोस्रो बचन : दोस्रो बचनमा कन्यले आफ्नो बरसँग बचन माग्छिन्, जुन हिसाबले तपाई आफ्ना मातापिताको सम्मान र प्रतिष्ठामा ध्यान दिनुहुन्छ, त्यसैगरी मेरो मातापितालाई पनि सम्मान गर्नुहोस् । साथै परिवारको मर्यादालाई ख्याल राख्नुहोस् ।
तेस्रो बचन : तेस्रो बचनमा कन्यले बरसँग जीवनको महत्वपूर्ण तीन अवस्था युवाअवस्था, प्रौढअवस्था र वृद्धावस्थामा मलाई साथ दिनुपर्ने बचन माग्छिन् ।
चौथो बचन : चौथो बचनमा कन्यले बरसँग भन्छिन्, अहिलेसम्म तपाई पारिवारिक दायित्वबाट मुक्त हुनुहुन्छ । तर बिवाहपछि परिवारको जिम्मेवारी तपाईको काँधमा आउँछ । परिवारको सबै दायित्व तपाईले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, सो कुरामा सक्षम हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई स्विकार्न सक्छु ।
पाँचौ बचन : पाँचौं बचनमा कन्यले बरसँग भन्छिन्, जब तपाई घरको काममा, लेनदेन वा अन्य काममा, केहि खर्च गरेको समय मेरो सल्लाह र सहभागिता पनि खोज्नुहुन्छ भने म तपाईलाई स्विकार्छु ।
छैठौं बचन : कन्यले बरसँग भन्छिन्, यदि म आफ्ना साथी वा अन्य महिलासँग बसेको छु भने तपाईले मेरो अपमान गर्नु हुँदैन ।
सातौं बचन : कन्याले अन्तिम बचन माग्छिन्, यदि तपाईले म साथै अन्य महिलालाई आमा समान मान्नुहुन्छ र हाम्रो प्रेमको बिचमा अरुलाई प्रवेश गर्न दिनुहुन्न भने म तपाईसँग विबाह गर्न राजी छु ।
Don't Miss it रहरले गर्ने होइन सम्बन्ध विच्छेद, त्यसपछि पनि सोचे झैँ जिन्दगी हुदैन
Up Next अध्ययन भन्छ – पुरुषले परस्त्रीलाई हेर्न मात्र जीवनको झण्डै ६ महिना खर्चन्छन्
अध्ययन भन्छ – पुरुषले परस्त्रीलाई हेर्न मात्र जीवनको झण्डै ६ महिना खर्चन्छन्
पुरुषहरू बलशाली हुन्छन्, उनीहरू निडर हुन्छन् भन्ने भ्रम धेरैमा पाइन्छ । जब कि पुरुषहरू बाहिरबाट जति कठोर देखिन्छन्, भित्र उति…
शनिबार जन्मिएका व्यक्तिहरु किन हुन्छन त भाग्यमानी ?
ज्योतिषी शास्त्रीका अनुसार हामि कति भाग्यमानी छौ भन्ने बारे बारले बताउने गर्छ । सात बारमा शनिवार जन्मिएका व्यक्तिहरु धेरै भाग्यमानी…
किन मागिन्छ त पुजा गरिसकेपछि भगवानसंग माफी ?
हिन्दू धर्मावलम्बीहरु हरेकको घरमा पूजा भएको नै होला । पूजा घरमा नभएपनि हामी मन्दिरमा गएर गरेका नै छौँ ।मन्दिरमा गएर…
गरिबी हटाउन श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई दिएका सुझाब l
भगवान् श्रीकृष्णले केही यस्ता वस्तुको वर्णन गर्नुभएको छ जसलाई घरमा राखेर सामान्य मनुष्यले दरिद्रता भगाउन सक्छ । सनातन धर्मका पौराणिक…
1 week ago 741 Views
भगवान शिवको घाँटी कसरि भयो नीलो ?
त्रिमूर्ति देवता मध्यमा संसारको संहारकर्ता महादेवको घाँटीको कण्ठ नीलो भएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । हिन्दु धर्मका विभिन्न ग्रन्थहरूमा…
प्लेन चढ्दा यी कुराहरु खानै हुदैन, नाम सहित
उहिलै यसरी पर्थ्यो लभ – भैरव रिसालको रमाइलो कुरा
प्रेम गर्ने हो या प्रेम हुने भन्ने दुई किसिमको हुन्छ । अरुको लागि गरेको प्रेम अल्पकालीन खालको हुन्छ । जबर्जस्ती…
10 months ago 4233 Views